No. 2 fahavaratra 2017 | The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ary Internet
Home Tsia 2 Summer 2017
Manantena aho fa mankafy ny fahavaratra ianao. Ny mpiasan'ny TRF dia sahirana nanomana ny vanim-potoana vaovao miaraka amin'ny lesona an-tsekoly manomboka amin'ny 1 septambra, lahateny ho an'ny GP sy atrikasa. Nanoratra taratasy izahay, nangataka famatsiam-bola ary mihaona amina olona maromaro ao amin'ny governemanta, manam-pahefana eo an-toerana, amin'ny fikambanana mpanao asa soa sy amin'ny haino aman-jery izay afaka manampy amin'ny fampandrosoana ny asantsika. Hampahafantarinay anao izahay rehefa mivoatra ireo fifandraisana ireo.
Ny valiny rehetra dia mankasitraka an'i Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Ao amin'ity fanontana ity
Mialà amin'ny fitondran-tena mahatsiravin'ny adolantsento
Fikarohana: mifantoka amin'ny fahasalamana
Toro-hevitra avy amin'ny boky
Valin'ny Fanamarinana any an-tsekoly
Dokotera any Edinburgh
Henoy izahay miresaka any Edinburgh
Fihaonambe tany Etazonia
Fihaonambe tany Kroasia
Tetika vaovao ho an'ny valin'ny Fanamarinana
Fisorohana zaza tsy ampy taona any Alemana sy Angletera
Tamin'ny 28 Jolay TRF dia nanatrika hetsika fanofanana iray andro nataon'ny NOTA (Fikambanana Nasionaly ho an'ny fitsaboana ireo mpanararaotra any Ekosy) miaraka amina mpandahateny 2 mahay. Voalohany dia ny profesora Klaus Beier (sary), manam-pahaizana iraisam-pirenena momba ny fisorohana ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy sy ny mpanao mari-trano an'ny Tetikasa fisorohana ny Dunkelfeld any Alemaina. Ny faharoa dia Profesora Kieran McCartan, mpanao heloka bevava ao amin'ny Oniversiten'i Bristol izay nandinika ny mety ho valin-kafatra misy ankehitriny ary mety hiasa amin'ireo mpamono olona any Angletera noho ny lesona avy amin'ny tetikasa Dunkelfeld. Jereo ny tantarantsika Eto.
Mary Sharpe, ny Lehiben'ny mpanatanteraka anay dia mpiara-miasa amin'ny 'sombin-kevitra' momba ny fisorohana ny fitondran-tena mahatsiravina ataon'ny tanora. Nota, ny Fikambanam-pirenena momba ny fitsaboana ireo mpanararaotra. NOTA dia fiantrana izay manome fanampiana ho an'ireo matihanina mifandraika amin'ireo meloka ara-nofo. Amin'ity famakafakana ny fikarohana vao haingana ity dia niditra tao amin'ny ekipa iray manerana an'i UK i Mary notarihin'i Stuart Allardyce, mpitantana nasionalin'ny Stop It Now! Scotland. Afaka mahita tantara momba izany ianao Eto.
Ny singa nofidiako ho an'ity vaovao ity dia antsoina Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Izy io dia nosoratan'ny American College of Pediatricians ho toy ny fanambarana politika ary nanomboka ny volana Jona 2016.
Abstract: Ny fahazoana sy ny fampiasana sary vetaveta dia nanjary saika nitaingenan'ny olon-dehibe sy ny tanora. Ny fanjifana sary vetaveta dia mifandray amin'ny vokatra ara-pahasalamana, ara-tsaina ary ara-batana ratsy. Anisan'izany ny fitomboan'ny taham-pahaketrahana, ny tebiteby, ny fihetsika miharo herisetra ary ny fihetsika mahery setra, ny fahatanorana, ny filan'ny nofo voalohany, ny filan'ny nofo, ny fitomboan'ny risika amin'ny fitondrana vohoka ny zatovo, ary ny fiheverana diso ny fifandraisana misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ho an'ny olon-dehibe, ny pôrnôgrafia dia miteraka fitomboan'ny mety fisaraham-panambadiana izay manimba ankizy koa. Ny American College of Pediatricians dia namporisika ireo mpitsabo ara-pahasalamana hilaza ny loza mety hitranga amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny marary sy ny fianakaviany ary hanolotra loharanon-karena mba hiarovana ny ankizy amin'ny fijerena sary vetaveta ary hitsaboana ireo olona mijaly amin'ny vokadratsiny.
Te-hanolotra boky ho an'ny ray aman-dreny, mpampianatra ary matihanina aho. Lehilahy, tapaka tapaka - Maninona ny zatovo no mitolona & inona no azontsika atao amin'izany dia avy amin'i Stanford Psychology Profesora Philip Zimbardo sy Nikita Coulombe. Miorina amin'ny lahatenin'ny Profesora Zimbardo 4 minitra TED tsara indrindra Ny famoizana ny lehilahy izay ilay mpiara-miasa miresaka amin'ilay mpiara-miasa amin'i Gary Wilson ilay lahateny malaza TEDx The Great Porn Experiment.
Ny lohahevitry ny boky dia ny fiatrehantsika tontolo vaovao tsy misy fahasahiana; tontolo iray izay navela ho any aoriana ny tovolahy. Ny mpanoratra dia milaza fa ny fiankinan-doha amin'ny lalao video sy ny pôrnôn'ny aterineto dia nahatonga taranaka tanora saro-kenatra, saro-tahotra ara-tsosialy, ara-pihetseham-po, ary tanora tsy mahomby, izay tsy afaka (sy tsy te-hahalala) mba hivezivezy ireo fahasarotana ary mety hitranga amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fiainana , sekoly, ary asa. Ny fijerena fanakianana ny olana iray izay mandrebireby ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina na aiza na aiza, Olona, ​​nopotehina dia manoro hevitra fa ny zatovolahy dia mijaly noho ny fiankinan-doha vaovao. Manolotra drafitra vaovao feno fahasahiana izy mba hamerenana azy ireo amin'ny làlana.
Ny toko farany dia manolotra vahaolana samihafa izay mety hisy fiantraikany eo amin'ny sehatra samihafa eo amin'ny fiarahamonina, anisan'izany ny sekoly, ray aman-dreny ary zatovolahy. Nofintinina tamin'ny filazàna ny anekdotes, vokatra fikarohana mahaliana, fanadihadiana lalina, ary soso-kevitra mahakasika ny fanovàna, ny olona, ​​Voakapoka dia boky ho an'ny fotoanantsika. Izy io dia boky mampahafantatra, fanamby, ary mitaona amin'ny farany.
Nandritra ny roa volana lasa izay dia nanadinadina manam-pahaizana efatra izahay.
Tamin'ny volana janoary izahay dia nanadinadina an'i Kenneth Cloggie, Edinburgh mpitsara mpamono olona manazava ny fepetra mety hitranga amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha ampangaina ho nanao firaisana ara-nofo. Hitany ny fiakaran'ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny fanafintohinana amin'ny aterineto. Ny tafatafa dia hiseho amin'ny tranonkala amin'ny fomba mety.
Raha nitsidika an'i Aostralia izahay tamin'ny volana jolay dia nanao fanadihadiana iray minitra 45 niaraka tamin'i Liz Walker, mpitarika mpanabe. Liz dia niseho voalohany tamin'ny sary vetaveta tafahoatra tamin'ny fiara fitateram-boly nandritra ny taona 6 taona. ny Tantara mamaky teny tsara. Miara-miasa amin'ny mpanentana amin'ny pelaka ihany koa izy, Profesora Gail Dines Culture Reframed.
Dr Paula Banca (sary etsy ambany), a mpikaroka momba ny neuroscience avy amin'ny Oniversiten'i Cambridge dia nanome fomba fijery mahasoa momba ilay taratasy fikarohana navoakany Novelty, fitondran-tena sy fitandremana fatratra amin'ny valisoa ara-pananahana. Ity fikarohana tsara ity dia nekena rehefa nahazo ny mari-pahaizana momba ny fikarohana 2016 avy amin'ny Fikambanana ho fampandrosoana ny fahasalamana ara-nofo.
Niverina tany Ekosy izahay, nanao tafatafa nifanaovana tamin'i Anne Chilton, lehiben'ny Fihetsiketseham-pikarakarana momba ny Fifandraisana amin'ny Scotland mba hianatra momba ny dingana fampiofanana ho an'ny mpitsabo mpanabe ao Ekosy. Nilaza izy fa manodidina ny manam-pahaizana 30 no nampiofanina hiatrika mpivady sy ny fiakaran'ny olana ara-pahasalamana ara-pananahana. Nalahelo izy noho ny fanampiana ara-bola kely avy amin'ny governemanta Scottish ho an'ity olana ity.
Hanafaka ny TRF kilasy ho an'ny mpianatra ao amin'ny Akademia Edinburgh, sekoly Kilmacolm an'i George Watson sy St. Columba momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana, fifandraisana, heloka bevava ary ny fifandraisana manomboka ny 1 septambra izao. Hiresaka ihany koa isika ray aman-dreny sy mpianatra ao amin'ny Fetin'ny Sehon'i George Watson amin'ny volana Septambra ary ray aman-dreny ny mpianatra ao amin'ny Tonbridge School, Angletera ihany koa amin'ny volana Oktobra.
Amin'ny 13 Oktobra dia manome lahateny ho an'ny Fikambanana Medicinéurirurgique de Edinburghmomba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet momba ny fahasalaman'ny tanora. Ity fikambanana ity dia miady hevitra momba ny raharaha ara-pahasalamana hatramin'ny 1821.
Andao hiaraka aminay amin'ny 16 Novambra ao amin'ny Sanctuary of the Augustine United Church, 41 George IV Bridge, Edinburgh, EH1 1EL rehefa ny tale jeneralintsika Mary Sharpe no ho mpandahateny lehibe indrindra ao anatin'ny Edinburgh International Foibe ara-panahy sy ny fandriam-pahalemana fiaraha-miasa. Hiresaka momba ny "Fanahy, Fangoraham-po ary fiankinan-doha" izy. Hanaraka izany ny adihevitra ifanakalozan-kevitra amin'ireo manam-pahaizana hafa, ao anatin'izany ny mpampianatra lohan'ny ray aman-dreny sy lefitra Audrey Fairgrieve, miaraka amin'ny dadany sy ny mpiaro ny fahasalamana, Douglas Guest. Ny mpikabary dia hatolotry ny Darryl Mead, ny sezan'ny Reward Foundation's.
Hanolotra atrik'asa ho an'ny mpitsabo matihanina, mpampianatra ary mpisolovava isika mandritra ny fihaonambe isan-taona Fikambanana ho fampandrosoana ny fahasalamana ara-pananahana tao Salt Lake City tamin'ny 5-7 Oktobra. Ny lohatenin'ity taona ity Fahasalamana ara-pananahana any amin'ny tontolo dizitaly.
Amin'ny 21 oktobra dia hiteny isan-taona isika fihaonam-pianakaviana tany Zagreb, Kroasia mitondra ny lohateny hoe "Fianakaviana, sekoly: lakilen'ny fahalalahana amin'ny fiankinan-doha". Ny anjara birikintsika dia hanomboka amin'ny lahateny ofisialy amin'ny maraina ary hitarika atrikasa iray isika amin'ny andro atoandro.
Vao haingana izahay dia niova avy amin'ny "atidoha momba ny fitiavana sy ny firaisana ara-nofo" taorian'ny The Reward Foundation, "ny fitiavana, ny firaisana ary ny aterineto". Ny hevitra dia ny manetsika ny lohahevitra amin'ny aterineto nefa tsy manonona ny teny hoe "pôrnôgrafia". Mbola mifantoka amin'ny fampianarana momba ny rafitra ateraky ny atidoha isika. Ny olona sasany dia nahita fa ny teny hoe "atidoha" kely dia kely, ny fahalalana ny efa fantatra efa ela momba ny fitsaboana na ny neuroscience dia nila namaky ny fanazavana. Tsy izany no izy.
Copyright © 2018 Ny Valisoa Fananana, Zo rehetra voatokana.
Nahazo ity mailaka ity ianao satria nisafidy tao amin'ny tranonkalanay www.rewardfoundation.org.Ny adiresy mailaka dia:
Ampio izahay ao amin'ny bokinao
Te-hanova ny fomba handraisanao ireo mailaka ireo?
Ianao dia afaka manavao ny safidinao or tsy misoratra eto amin'ity lisitra ity